Madaxweynaha SL oo shaaciyey in 59% la dhameystiray Dekeda Berbera oo ay dhistay DP WORLD
HARGEYSA(P-TIMES) – Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay magaalada Hargeysa maanta ayaa sheegay in 8 waxyaabood uga qabsoomeen dibu dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee maamulkaas, wuxuuna kusoo daray Dekeda magaalada Berbera oo ay gacanta ku hayso shirkada DP WORLD ee laga leeyahay dalka Imaaraatka Carabta, taas oo loo qandaraasay in ay haysato Dekedaas 30-ka sanno ee nagu soo wajahan.
Madaxweynaha Somaliland ayaa sheegay in 59% la dhameystiray dibu balaarinta dekedii hore ee magaalada Berbera, isagoo sheegay in qorshuhu uu yahay dhawaan in dhawaan la dhameystiro gabi ahaanba loona dhaqaaqo fulinta qeybta 2aaad ee heshiiska ah oo dhismaha deked kale oo Casri ah taas oo horey ugu jirtay heshiiska ay labada dhinac kala saxiixdeen.
“59% ayaa la dhammaystiray Wejigii Koowaad ee dhismaha ballaadhinta Dekedda Berbera oo ka kooban 400 Mitir, Waxa la dhisay 16% ka mid ah Marinka Dhaqaale ee Berbera Corridor ee isku xidha Somaliland iyo Ethiopia, Waxa bisha June 2020 la bilaabi doonaa, haddii xanuunka COVID-19 saamaxo, dhismaha waddada Bye-pass Hargeysa oo dhererkeedu yahay 22.5 KM” ayuu yiri Madaxweynaha Somaliland.
Sidaas oo kale isagoo sii wata waxyaabaha ay kahirgalisay Xukuumaddiisu dhinaca ku wajahan Dhismaha wadooyinka ayuu sheegay in ay dibu eegeen dhamaan wadooyinka oo ay wax badan ka qabteen mudadii uu xilka hayay.
“Waddada Burco–Ceerigaabo waxa la dhisay 117 Km intii Xukuumaddani xilka haysay, waxaana hore u dhisnaa 94 Km, waxa dhiman 63 Km oo kaliya, waxaana qorshaysan in sannadkan gudihiisa la dhammaystiro, Waxa la dhisay 50 Km oo ka mid ah waddada isku xidha Hargeysa -Kalabaydh, Waxa la dhammaystiray Dhismaha Biriishka Qoor-gaab ee isku xidha Magaalada Boorama iyo Jaamacadda Camuud” ayuu yiri Muuse Biixi.
Col, Biixi wuxuu sheegay in gobalka Sool wadooyinkiisa dib wax looga qabtay gaar ahaana inta u dhaxaysa deegaanada Tuula-Samakaab iyo Adhi-Cadeeye oo kuyaala duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobalkas, isagoo sheegay in ay wax badan qaban doonaan.
“Waxa dayactir ballaadhan lagu sameeyey jidka isku xidha Laascaanood, Tuula-Samakaab iyo Adhi-caddeeye, Waxa dayactir ballaadhan lagu sameeyey Biriishka labaad ee magaalada Burco oo roobabku khasaare gaadhsiiyeen” ayuu khudbadiisa dhanka Kaabayaasha dhaqaalaha kusoo gabagabeeyey Madaxweynaha Somaliland.
Ac. Waa horumar Muuse Biixi ku faani karo si gaar ah iyo guud ahaan Somaliland, halka Puntland iyo hagaankeeda kii yimaadaba xaalka uga sii daro, tusaale Faroole hal MCH ma dhisin halkuu xaafad dhan kelidii dhistay, C/Weli Gaas dekeda lacagtii laga qaatay buu jeebka ku shubtay, Laamigii Garoowe iyo Gaalkacyo u dhaxeeyayna dad aan xil kas ahayn buu gacanta u geliyay, hada Siciid Deni 3 qof haduu shaqo qoro ugu yaraan 2 waa reer Qardho.
Sidee horumar lagu gaari, hadii la hadlo qabiil baa loo rogi.
Koonfurtu iyadu waa kii ku hor mara kan kale wuu dili iska daa horumar.
Ilaahow Soomaali xaqa tus , quluubtoodana isku soo jeedi.
Waa run in Puntland ay ku faani karto,dakaddii Bossaso oo xaraashay Mudane Gaas oo sida laga warqaba,xildhibaanada la soo magacaabo,xitaa afka wax ugaliyey,si arinto u noqoto nin wax cunau xishoo,
Deni isna wadaddii Gaas ayuu maray dhowr jeer buu ku laabtay (U.A.E)
Waxa uu si musumaasuq ah loo siiyey lacag,si arimaha ku saabsan shirkada DP world aan wax hadal ah looga keenin.
Ilaa iminka hal Dollar u lago balaarinay Dakada Bossaso,DP world ma bixin,haddaba la filimaayo,waayo imaaraadka dhaqalihiisii baa iminka aad u liita.
Gunaanadkii waxa loo baahanyahay in si gabasho lahayn,in Maamulka Deni musumaasuqa oo yahay howl maalmeedkiisa shaqo runta loo sheego oo la laalio geshiiskii markiisii horaba,aan ahayn mid dan u ah,Puntland iyo Soomaaliya guud ahaan.
Muuse biixi awalba waxa uu ahaa qaa’ino wadan,isaga iyo kuwa figradaha midnimada,qaranimada iyo wadajirka Soomaaliya diidan,wax weeye in la go’doomiyo oo aan wax jixin jix ah loo muujin,waa cawdow ka daran,wax walba ee Soomaaliya la soo gudboonaada,waxa nacasnima ah,in siddii haboonayd aan loo dhaqmin.oo ahayd in la muujiyo in ay hiin
Muuse Biixi iyo gooni ugoosatada, wax aan sinaba looka heshiin karin,oo aan waxba looharin,la caburiyo,la go’dooniyo inta Soomaaliwayn ta aamisan,laga jaro oo geed cidla la soo taago,dabadeedna,xadka kaga xiro.Ethiopia iyada runta loo sheego,faraha kala bax,arimaha Soomaaliya,oo waa in la xiro,qunsuliyadaha Hargaysa iyo Garowe oo ah dhaawac qaranimada Soomaaliya.
Soomaaliya ha midowdo si buuxda,siddi berisamaadkii.